जय स्वाभिमान - Jaya Swabhiman जय स्वाभिमान
एउटा नेपाली : उसले आफ्नो मातृभूमिको गुनगान गाएकै हुन्छ, आमाको सम्मानमा केही शब्द बोलेकै हुन्छ, पूजा गरेकै हुन्छ जननीको
जहाँ पुगोस् एउटा नेपाली : उसले आफ्नो मातृभूमिको गुनगान गाएकै हुन्छ, आमाको सम्मानमा केही शब्द बोलेकै हुन्छ, पूजा गरेकै हुन्छ जननीको ! व्यक्त गर्न सके पनि नसकेपनि मनमा आफ्नो देशको भाव-झंकार गुन्जाइरहेको हुन्छ । नोभेम्बर २ तारिक, शनिबार अमेरिकाको एटलान्टामा संसारका थुप्रै देशका मानिसहरु र तिनको पहिचानसहितको प्रस्तुतिबीच एक विशेष कार्यक्रमको
हरिकृष्ण न्यौपाने कुबेतमा कर्मरत हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्म एक लगावका रुपमा लामो समयदेखि अभ्यासरत न्यौपानेलाई यो विश्वमहामारीले केही गलाएको छ र गलाएको छ स्वदेशको सम्झनाले । यो बिपद्को अप्ठेरो वेला मात्र होइन हिजोका सहज दिनहरुमा पनि जन्मभूमिप्रति उत्तिकै आशक्ति र समर्पण राख्दै आउनु भएका न्यौपानेलाई यस्तो भइरहेको छ कि देशभित्र रहेको परिवार, आफन्त, साथीभाई र सम्झना पनि […]
नेपाली राजनीतिमा एक फरक ‘युवाआशा’को नाम हो सुबुना बस्नेत । गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर ४ का लागि
टीकापुर कैलालीका आनन्द शाह पाँच वर्षदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्समा हुनुहुन्छ । आफूजस्तै परदेशमा रहेका नेपाली युवाहरुको व्यथा सम्झिएर शाह भन्नुहुन्छ
यस्तो लाग्छ एक पाईला पनि यताउता नसारी यतिवेला सम्पूर्ण जीवन टक्क अडिएको छ ! पूरै विश्व नै कहीँकतै नचल्मलाइ टक्क
यादव देवकोटा सञ्चारकर्मको उज्ज्वल सम्भावना र उज्यालो नाम हो । गोरखा, नेपाल जन्मभूमि तर परिस्थितीवस् यतिवेला पोर्चुगलको लिस्बनमा बसोवास गर्नुहुन्छ
जीवनको धेरै हिस्सा नेपाली पत्रकारितामा बिताएका मानछिरिङ तामाङ चार वर्षदेखि अमेरिकामा हुनुहुन्छ । अनेकौं उतारचढावहरुबीच सहज भविष्यको जोहो गर्न अमेरिकामा श्रम गर्दै आउनुभएका तामाङ गत मार्च २२ मा एक्कासी बिरामी पर्नु भयो । रुघाखोकी र पूरै शरीर दुखेर बिरामी उहाँलाई बहिनीज्वाईं लुइसाङ वाइबाले मार्च २४ तारिख न्यूजर्सीदेखि न्यूयोर्क लिएर आउनुभयो । २६ तारिख अर्जेन्ट केयरमा […]
विश्व महामारीबीच एउटा परदेशीको मन, अमेरिकाको टेक्ससबाट…
विश्व-बिपत्तिमा देश सम्झेर आशातीत् र सकारात्मक महरु !
अष्ट्रेलिया, महेश्वर शर्मा खासमा एक कविहृदयको नाम हो । सन २००८ देखि अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा बस्दै आउनुभएका शर्मा जिन्दगीमा मभन्दा 'म'जस्ता म''हरुको आवाज बोल्ने कवि हुनुहुन्छ । छातिमा देश हुर्काएर परदेशिएका लाखौं नेपालीको प्रतिनिधिमात्र होइन खास[ ... ]
राजानन्द माण्डब्य निरन्तर देश, स्वाभिमान, पहिचान र अस्तित्वका लागि अथक एक नेपाली योद्धाको नाम हो । राष्ट्रिय पोशाक संरक्षण महाअभियान नेपालको संयोजन गरिरहनु भएका माण्डब्यले देशभित्र र संसारभर रहेका नेपालीबीच राष्ट्रिय पोशाक दिवस स्थापित गर्नुभयो र निरन्तर ‘देश नांगो हुँदैन देशको पोशाक चाहियो’ भन्दै अबिराम आवाज बुलन्द गरिरहनु भयो । उनै माण्डब्यलाई सिमाना मिचिएकामा देश […]
स्वदेश सम्झिएर उकुसमुकुस छौं परदेशमा तर नेताहरु यो के गर्दैछन् स्वदेशमा ?
जय स्वाभिमान, फिजी देशबाट ! भीमसेन सापकोटाको साथमा !
एउटा बुलन्द आवाज भारतबाट !
प्रेम बानियाँको फेसबुकबाट साभार: मैले संसारमा खुब माया गर्ने आफ्नी आमाको अनुहार खोपेको भएपनि हुन्थ्यो । प्रिय श्रीमती, छोरीहरुको नामै खोपेको भएपनि अर्कै खुशी हुन्थ्यो…